Ahoana ny fomba hahazoana visa any Aostralia | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Aostralia, soso-kevitra
Iray amin'ireo toerana fizahan-tany mahafinaritra any amin'ny faritra Azia-Pasifika i Aostralia. Ny firenena dia tsara tarehy raha ny fomba fijery ny tontolo voajanahary ary na dia tsy maharitra aza ny fanjanahana eropeana dia manana kolontsaina teratany manankarena sy tranainy.
Aostralia Firenena mandroso izy, vitsy mponina, maoderina ary mbola mitombo. Ho fanampin'izay dia misy mahaliana rafitra visa izay mamela tsy handeha hanao fizahan-tany fa miasa izao fianarana ary manolotra visa manokana natokana ho an'ny tanora sy fanahy tsy milamina koa izy io. Tianao ve ilay hevitra? Eto ianao manana ny fampahalalana ilaina momba ny fomba hahazoana visa any Aostralia.
2 Karazana visa nomen'i Aostralia
Voalohany indrindra, tsara kokoa ny mijery hatrany amin'ny masoivohon'i Aostralia ao amin'ny firenenao, satria mazava ho azy fa miovaova arakaraka ny firenena ny fepetra visa. Raha ny raharaha Espana dia misahana ny Espana, Andorra ary Guinea Equatoriale ny masoivoho eto.
Ny hetsika diplaomatika teo amin'ny firenena roa tonta dia niteraka fifanarahana ara-barotra ary tamin'izay, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia orinasa Espaniola zato farafaharatsiny no tonga tany amin'ny firenena Pasifika. Orinasa hafa no nandresy fifanarahana ara-tafika ary misy koa ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin'ny tafiky ny tafika roa tonta. Raha ny momba ny visa dia tsy maintsy tsidiho ny tranokalan'ny Departemantan'ny fifindra-monina sy ny zom-pirenena, misy ny foibeny any Madrid.
Eto, ny fizarana Visa sy ny fifindra-monina dia ny iray izay manodina ny fangatahana visa.
Karazana visa nomen'i Aostralia
Raha ny momba ny visa ho an'ny mpitsidika dia manolotra ny eVisitor, Visa Transit, Visa mpitsidika, Visa miasa & fialantsasatra ary Visa fialantsasatra miasa. Raha olom-pirenen'ny Vondron Eropeana ianao ary maniry ny handeha any Aostralia hanao raharaham-barotra na fahafinaretana dia tsy maintsy mangataka visa sokajy ianao eVisitor.
Ny dia mahafinaritra dia milaza vakansy, fitsidihan'ny mpianakavy, fitsidihana olom-pantatra sy namana. Ny dia raharaham-barotra dia misy ny fanatrehana fihaonambe, raharaham-barotra, fitsidihana voalahatra, sns. Ity karazana eVisa ity dia tsy mamela anao hiasa any Aostralia, raha ny hevitrao dia tsy maintsy manamboatra karazana visa hafa ianao, ny Visa Mandritra Asa.
Ny eVisitor dia mamela anao hiditra sy hiala ao Aostralia ao anatin'ny roa volana manomboka amin'ny daty namoahana azy. Isaky ny miditra ny firenena amin'izany taona izany ianao dia avela hijanona mandritra ny telo volana farafahakeliny. Ny visa Maimaimpoana Ary satria elektronika izy io, dia mifandray amin'ny isa pasipaoro ary tsy mila antontan-taratasy ara-batana hafa ianao. Mba handefasana azy dia mandefa fampiharana an-tserasera ianao ary raha mivezivezy amin'ny vondrona na fianakaviana dia tsy maintsy mandefa fangatahana isaky ny mpikambana ao amin'ny vondrona, ao anatin'izany ny ankizy.
Amin'ny Internet dia ho fantatrao ny ora fanodinana ho an'ny fangatahana visa izay miovaova arakaraka ny toe-javatra iainan'ny mpangataka tsirairay: ny hafainganan'ny valiny raha mangataka fanazavana fanampiny izy ireo, na efa natolotr'izy ireo na tsia ny antontan-taratasy ilaina rehetra, ny fotoana izay anaovan'ny manampahefana tompon'andraikitra izany firaketana heloka bevava, antoky ny vola ary raharaha toy izany, sns.
Ary amin'ny ampahany amin'ny ambasady ny isan'ny toerana misy ao amin'ny programa fifindra-monina na ny fotoana anodinana ny fangatahana, na vanim-potoana lehibe na tsia, ohatra, misy fiantraikany ihany koa.
La Transit Visa (subclass 771) dia fahazoan-dàlana hifindra manerana ny firenena 72 ora fotsiny. Tsy maintsy manana antontan-taratasy ianao raha hiditra amin'ny firenena hafa, ny toerana halehanao ary izany koa a visa maimaim-poana. Amin'ny ankapobeny dia amboarina ao anatin'ny valo andro na dimy fotsiny izy io. Mety hangataka taratasy fanamarinana ara-pahasalamana izy ireo fa tsy maintsy miandry ny ambasady mangataka izany ianao.
La Visitor Visa, subclass 600, mamela anao miditra amin'ny raharaham-barotra ary mijanona telo, enina na roa ambin'ny folo volana. Mpitsidika ianao ka tsy mamela anao hiasa. Ny fikirakirana ity visa ity dia mitentina AUD 140 ka hatramin'ny AUD 1020. Ny visa mpizahatany iray dia mety mitaky 22 andro ka hatramin'ny iray volana. Ho an'ny fitsidihana ara-barotra dia kely kokoa ny fotoana.
La Visa miasa sy fialantsasatra, sokajy faha-462, dia manokana ho an'ny tanora te hiala sasatra ary hiasa kely any Aostralia mandritra ny herintaona. Tokony 18 taona farafahakeliny ianao ary tsy mihoatra ny 31 taona, tsy manan-janaka miankina ary ho olom-pirenen'i Arzantina, Aotrisy, Silia, Peroa, Uruguay ary Espana, ohatra, eo amin'ireo vondrona firenena nanakatonan'i Aostralia fifanarahana ity. Ireo visa ireo dia zahana matetika ao anatin'ny 33 ka hatramin'ny 77 andro.
Ny visa mamela anao hijanona herintaona ary hiasa enim-bolana farafaharatsiny, mianatra mandritra ny efa-bolana ary miala ary miditra amin'ny firenena impiry araka izay tadiavinao amin'ity taona ity. Tokony tsy hadino fa ny Aostralia dia manome visa Work & Holiday isan'ny firenena voafetra, ka raha mahaliana anao ny dia dia tokony hanao zavatra haingana ianao. Maimaimpoana ny fomba fiasa. Etsy ankilany, misy ny Working Holiday Visa, sokajy 417, mitovy amin'ny an'ny teo aloha ihany. Amin'ity tranga ity dia mieritreritra ny hanitatra ny fetran'ny taona 31 hatramin'ny 35 taona ny governemanta aostralianina.
Mazava ho azy fa misy koa hafa visa orinasa, visa mianatra, hanambady olom-pirenena Aostraliana sy visa maha-olona sy ny mpitsoa-ponenana, amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana, sns. Raha toa ka visa fianarana, visa hafa mety hahaliana antsika, misy sokajy telo. Ilay Visa ho an'ny mpianatra, sokajy 500, izay manome alalana anao hijanona mandritra ny fotoana maharitra amin'ny andrim-pianarana. Ny mpianatra dia tokony ho enin-taona farafahakeliny, ny andrim-panjakana dia tokony hanaiky anao ary tokony hanana fiantohana ara-pitsaboana ianao. Io dia ahafahanao mijanona hatramin'ny dimy taona ary mandany vola AUD 560.
La Visa ho an'ny mpianatra Omena ireo izay tsy maintsy mikarakara mpianatra iraisam-pirenena latsaky ny 18 taona eo am-pianarana ao amin'ny firenena. Tsy maintsy mpiambina havana na ara-dalàna ianao, manana vola ampy hivelomana ary farafaharatsiny 21 taona. Mitovy ny vidiny. Ary farany misy ny Visa fampiofanana izay atolotra an'ireo olona matihanina ary te-hanana traikefa amin'ny faritra misy azy ireo na handray anjara amin'ny programa iray ao amin'ny firenena. Tokony ho 18 taona farafahakeliny ianao, avela hijanona roa farafaharatsiny ary voajanahary, tsy maintsy misy fanasana avy amina orinasa na andrim-panjakana. Ny vidiny dia AUD 280.
Heveriko fa anatin'ireto visa ireto dia tena hahita ianao izay mifanaraka amin'ny filanao sy ny fanirianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Ahoana ny fomba hahazoana visa any Aostralia